Njirimara, postulates na njehie nke usoro Dalton atomic | Netwọk Mgbasa Ozi
John Dalton bụ onye Bekee, physics na meteorologist nke mere mgbanwe na ụwa sayensị maka nnabata nke atọmịk atọm. A maara tiori a dika atọmịk nlereanya nke Dalton ma ọ dị ezigbo mkpa. A makwaara John Dalton maka ọmụmụ ya na enweghị ike ịmata ọdịiche dị na agba na anya mmadụ. Nke a bụ otu anyị si mara nkwarụ a dị ka agba isi.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị gbasara njirimara na mkpa niile ụdị atọmịk Dalton nwere maka sayensị.
1 Nwa obere akụkọ Dalton
2 Kpụrụ ụkpụrụ nke atọmịk nke Alto
3 Ntụle ndị ọzọ nke Dalton Atomic Model
4 Nabata ụdị atomic Dalton na njedebe ya
Nwa obere akụkọ Dalton
Iwebata Dalton nke atomic nlereanya, ka anyị buru ụzọ tụlee akụkọ ihe mere eme nke a ọkà mmụta sayensị a bit. Ma ọ bụ na echiche nke atọm malitere site na onye ọkà ihe ọmụma Gris Democritus. Agbanyeghị, nkwenye a abụghị ihe a nabatara ebe niile na ọbụlagodi ọtụtụ ndị sayensị chọpụtara na ọ bụ ihe ọchị ruo ọtụtụ narị afọ na narị afọ. Ebe ọ bụ na Atomism a na usoro ihe ọmụma Greek niile dị adị, ihe karịrị puku afọ abụọ agafeela maka usoro atọm atọ ọzọ iji nwee ụdị mkpa a na ụwa sayensị. Otú ọ dị, na 2, John Dalton, ọ dabere n'echiche nke Atomist ka ọ nwee ike igosipụta ụdị atomic Dalton.
Ihe nlereanya ya bụ nsonaazụ nke nkwubi okwu ndị o nwetara site n'ọtụtụ nyocha emere na ụdị gas dị iche iche. Dabere na nsonaazụ nke nyocha ndị a, enwere ike igosi na atọm dị adị n'ezie. Democritus egosipụtaghị na atom dị ka ọ dị. N’ụzọ dị otu a, e kere otu n’ime echiche ndị kachasị mkpa n’akụkọ ihe mere eme nke physics nke oge a.
Ọzọ, anyị ga-akọwa ụkpụrụ bụ isi nke usoro atọmịk nke Dalton.
Kpụrụ ụkpụrụ nke atọmịk nke Alto
Ihe niile sitere na atom. Nke a pụtara na ihe ọ bụla anyị maara na nke a na-ahụ anya nwere atọm dị na mbara ụwa anyị na ụwa ndị ọzọ a ma ama. A na-ejikwa atọm emepụta ihe niile.
Atọm anaghị ekewa ekewa. Dalton chere na atom dị ka ihe pere mpe karịa ihe na-enweghị ike ibibi ya.
Atọm nile nke ihe mmewere bụ otu. Anyi aghaghi imata na atoms nile nke mejuputara udi mmewere nwere otu uzo na otu njirimara. Ha nwekwara otu ahu na aru n’aru n’otu uzo.
Atọm dị iche iche dị iche iche dị iche iche dị iche iche. Nke a bụ ihe na-eme ka ihe ọ bụla dị iche na nke ọzọ. Ebe ọ bụ na ihe niile mejupụtara atọm, atọm ndị a nwere njirimara na oke dị iche iche.
Ngwakọta mejupụtara ụdị atọm atọ ma ọ bụ karịa dị iche iche. Nkwupụta a nke ogige bụ ihe na-akpata mgbanwe dị ukwuu na ihe ndị dị na ya. Ma ọ bụ na, ọ bụ ezie na onyinye ahụ nwere otu ụdị atọm, a jikọtara ha n'otu ọnụ ọgụgụ.
A chemical mmeghachi omume bụ nhazigharị nke atọm. Mgbe ihe kemịkal pụtara, ọ dịghị ihe ọzọ karịa nkewa, njikọta ma ọ bụ ịhazigharị atọm. Anyị anaghị ekwu maka atọm na-agbanwe agwa ha ma ọ bụ oke ha. Atọm nke otu mmewere anaghị agbanwe na atom nke ihe ọzọ dị ka nsonazụ kemịkal siri ike. Naanị gbanwee nzukọ gị.
Ntụle ndị ọzọ nke Dalton Atomic Model
Ozugbo a kọwapụtara ụkpụrụ nke ihe nlereanya ahụ, a ga-enwerịrị echiche ndị ọzọ nwere ike mezue njirimara niile nke ụdị ahụ. Na mgbakwunye na ụkpụrụ ndị a John Dalton tụpụtara nke ahụ atọm nke ihe ndị ha na ibe ha na-emekọrịta iji mepụta irighiri irubere iwu nke nchekwaba nke ihe. Nke a pụtara na ọnụọgụ na ụdị poise nke molekul nwere ruru ọnụọgụ na ụdị atọm nke ngwaahịa ndị ejirila na mmeghachi omume kemịkal. Nke a na-erube isi n'iwu nke kwuru na e keghị ma ọ bụ bibie ihe, kama a na-agbanwe ya.
Akụkụ ọzọ dị mkpa nke ụdị atọmịk nke Dalton bụ Iwu nke Otutu Ogologo. Iwu a na-agwa anyị na ọ bụrụ na anyị jikọta atọm nke ihe abụọ, atọm ndị a nwere ike ikpokọta naanị n'ihe metụtara ọnụ ọgụgụ zuru ezu. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, a pụrụ ịchịkọta atọm ka atọm ọzọ, atọm atọ na otu atọm, atọm abụọ na atọ abụọ ndị ọzọ, wdg. Otu ihe atụ na-enyere anyị aka ịghọta Iwu nke Otutu Oke bụ ihe ndị a: anyị na-ewere mmiri wee jikọta ya na oke 2 ruo 1. Nke a pụtara na mmiri nwere atọm hydrogen abụọ maka nke ọ bụla ikuku oxygen. Yabụ, enweghị oke otu o nwere na ihe ndị a nwere ike iji mepụta mmiri. Nke ahụ bụ, anyị enweghị ike ịmepụta mmiri ma ọ bụrụ na anyị ejiri atọ hydrogen atọ na atọ oxygen atọ.
Inwe ike inye njirimara na atọm Dalton kee tebụl nke igwe igwe. Tebụl a bara ezigbo uru ebe ọ bụ na ọ nwere ihe niile dị n'usoro dabere na ibu ha. Ejiri ihe niile dị na tebụl tụnyere hydrogen, nke a bụ nke kachasị mfe. Ya mere, hydrogen bụ nke mbụ na tebụl ma nwee nọmba atọmịk.
Nabata ụdị atomic Dalton na njedebe ya
Ebe ọ bụ na ụdị ndị a mebiri atụmatụ ndị e guzobere ruo mgbe ahụ, ihu ọma ahụ siri ike karị. Otú ọ dị, ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị nke oge ahụ nakweere ụdị nke atọ nke Dalton. Ekele maka ụdị atomic a, anyị nwere ọtụtụ ntọala nke echiche nke ugbu a.
Ndị ọkà mmụta sayensị nke oge a maara na atọm nwere ọtụtụ ụdị ihe pere mpe dị ka proton, neutron, na electrons. Nkwupụta Dalton a ghọrọ ntọala maka echiche nke kemịkal.
Nsogbu nke usoro atumatu a nwekwara ụfọdụ njehie na mmachi. Ma ọ bụ na Daltón bu n'uche na atọm nke ihe niile nwere ike ịnọrọ n'otu n'otu, yabụ na ọ nweghị ike ịghọta na n'ihe ụfọdụ atọm dị na-akpụ mkpụrụ ndụ, dịka ọmụmaatụ na ezigbo oxygen. Ọcha oxygen dị ọcha atọ mejuputara. Nke ahụ bụ, ọ bụ molekul nke otu ihe ahụ mana nke nwere mkpụrụ oxygen abụọ.
Otu isi njehie nke ihe nlere a bụ na e chere na ihe kachasị mfe n'etiti ihe abụọ bụ atom nke ọ bụla. Nke a mere ka o kwubie na mmiri ahụ bụ HO karịa H2O.
Agbanyeghị, ụdị atọmịk nke Dalton mere ka ụwa kemịkal na physics gaa n'ihu. Enwere m olileanya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ụdị atọmịk Dalton.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Tondị atomic nke Dalton